Ị ma ihe jikọrọ ọrụ SEO na video ọdịnaya kachasị mma?
Ọdịnaya vidiyo na-aghọwanye ihe dị mkpa ugbu a karịchaa, karịsịa banyere usoro ntanetị ịntanetị zuru ezu. N'etiti ebe kachasị ike nke vidio ndị na-enye nkọwa dị na ibe weebụ ọ bụla, ana m ahụ ụzọ ndị dị otú ahụ, dịka ị na-ebugharị ndị ọzọ na-eduga, na-eme ka ikike nwe aha na-adabere na njirimara nke ọma na ndị ahịa, na n'ikpeazụ, nnukwu ego na-enweta ihe ọ bụla maka ịntanetị n'ozuzu.
Kachasị, ọdịnaya nke vidiyo na-ejikọta ya na mgbasa ozi mgbasa ozi na ya. Ma, ọ bụ nnukwu ndudue iji kwere ya. Ee, n'ezie, Twitter, Facebook, yana YouTube n'onwe ya bụ ihe magburu onwe ya maka ịtụkwasị vidiyo mgbasa ozi gị. A na-eji nhazi niile a-gosipụtara ma kwesị ekwesị maka ime ụdị ahụ. Mana nke a na - abata ajụjụ dị oke egwu - gịnị ma ọ bụrụ na esemokwu dị n'etiti SEO na ọdịnaya vidiyo? Dika nyocha uchu nke uzo bu ihe ndi ozo karia ihe. N'ezie, site na echiche nke engines na-achọ, ịnweta ọdịnaya kachasị mma nke vidiyo dị ka ịnwe ọdịnaya dị mma, ma na ụzọ ya onwe ya. N'okpuru ebe a, a tụlere mkpirikpi - ma SEO na ọdịnaya vidiyo kwesịrị ịbịakwute aka iji mee ka okporo ụzọ ndị ọzọ na-ejikarị ghọọ ndị ruru eru? Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na ya? Ọ dị mma, Ana m egwu egwuregwu ebe a. Ma mụ onwe m, ihe dị oké mkpa iji nweta ọrụ m na SEO na ọdịnaya vidio nke jikọtara nke ọma na onye ọ bụla ọzọ aghọworịrị ọnọdụ nke ihe na-adịghị mma. Aga m egosiputa na ekwesiri m maka ya. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ụfọdụ nkwekọrịta maka inwe obere njikarịcha vidiyo na arụmọrụ kachasị maka azụmahịa gị n'ịntanetị.
Tupu anyị amalite, ka anyị ghọta otu aro dị mfe - ibe weebụ SEO na njikwa ọdịnaya vidio dị nnọọ iche, mana ka ọ bụghị otu. Dị ka ihe odide mbụ nke ederede, Google na-ahọrọ vidiyo site na ịchọta ọdịnaya ọdịnaya na ọnụ ọgụgụ nke backlinks siri ike. Ka anyị lee ụfọdụ n'ime ahụmahụ m mbụ iji mee ka ụdị ọdịdị ha dị mma.
Nke mbụ, ka anyị gaa n'ihu na vidiyo. Inwe ihe omimi vidio ederede na ibe weebụ gi ga-adi nma maka ndi obula: ndi n'eziokwu na-enweta ihe di mkpa na itinye aka na ntughari karia, ebe ndi oru uchu choro ka ha ga enye gi karia ogo na SERPs. Na-eme nke a, anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere ndị na-agba ụgbọ mmiri aka "na-agụ" ọdịnaya vidiyo dị ka a ga - asị na ọ bụ naanị ederede nkịtị. Ị ga-achọ ederede okwu zuru ezu, yana ederede ederede maka vidiyo ọ bụla ị ga-aga. Iji mee nke ahụ, m na-atụ aro na iji ahụmịhe ruru eru na mpaghara a nke Moz mere (naanị lelee vidiyo ha dị egwu na Whiteboard Friday). Ị nwere ike ịchọgharị nke ọma na pọdkastị kacha mma nke ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ na Ịntanetị.
N'ikpeazụ, ka anyị gbadaa na njikarịcha metadata maka vidiyo. Dị ka m kwuworo, karịsịa akụkụ a nke ọrụ SEO na vidiyo na-arụ ọrụ kachasị mma Source . Naanị nwere nkọwa nkọwa vidio gị, yana aha ọ bụla:
na-esikwu ike ma nabatara maka ntinye aka dị ukwuu
dị ezigbo mkpa na nke okike maka ọdịnaya weebụ gị
) na-ejikọta na naanị isiokwu dị mkpa maka nchịkọta ahịa gị ma ọ bụ ndị na-ege ntị
nkọwa nke na-abịa na mkpụrụedemede 155
nchịkọta ihu na-eguzo n'okpuru ederede 55